Korea: Myanmar sy Korea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2007 7:00 GMT
Inona no eritreretin’ny Koreana amin’ny toe-draharaha any Myanmar ? Mahaliana fa hitan’ny mpibilaogy ho mifandraika amin’ny tantaran’i Korea ny zavamisy any ary tahaka ny mifamatotra amin-dry zareo ilay firenena..Mampahatsiahy an’ireo mpibilaogy izay efa niainan-dry zareo tany Korea tamin’ny taona 1980 tany ho any ny zavamisy ao Myanmar ankehitriny.
Lasa manana toerana manokana ho ahy i Burma na antsoiko hoe Myanmar hatramin’ny nahatany amin’ny sekoly ambony ahy. Tsapako ho tahaka ireo nitolona ho amin’ny fahaleovantena Koreana aho [sy] ireo mpitolona ho amin’ny fahaleovantena tany Japana, Shina, Manditsoria ary Amerika nandritra ny fanajanahantany Japoney mahita ireo Birmana mihetsiketsika ho amin’ny fampanjakana ny demokrasia…
Ary ankehitriny.Sivily sy mpanokatena Bodista eo ho eo amin’ny 100.000 eo ho eo no mivondrona ao anaty fihetsiketsehana tsy mampiasa herisetra manohitra ny fitondrana miaramila ary dia misy ny maty sy ny maratra noho ny famoretana avy amin’ny governemanta Birmana.
Ao amin’ny firenena tsy manavahiny azy intsony, mety efa ho hafa mihitsy ny ao an’eritreriny ao raha mijery ny firenena [Myanmar] tsy ahafahany miala izy.Ankehitriny, mahatsiaro ny herisetra sy ny fandripahana tao Kwanju [Korea] tamin’ny taona 1980 aho mijery ny fihetsiketsehana, ny herisetra hamongorana izany ary ny famonoana hita lany.
Miantso ny mpibilaogy hafa koa aza ny Sasany amin’izy ireo mba hanohana ireo Birmana mpanao fihetsiketsehana.
(Avy amin’i Jung Beom-Rae mipetraka any Myanmmar ireto sary ireto. Tapaka moa ny aterineto any, ka tsy afa-mandefa vaovao matetika izy. Niangavy ahy izy mba haseho ireo sary ireo.) Hanonganana ny fitondrana jado-miaramila no itokonan’ny vahoakan’I Myanmar. Mba hamoretana ny sivily kosa dia andia-tafika roa no nalefa tany Rangoon, renivohitry Myanmmar. Aripany amin’ny benitra sy ny basy ny sivily tsy manantsiny. Tokony hanakana io fandripahana mamparikoditra io ny fianakaviambe iraisampirenena…Miangavy izay rehetra tia fandriampahalemana aho mba hanasonia ity takelaka fanangona-tsonia ity.
Mampahery ny Birmana ny mpibilaogy hafa toa an’i Indofantazy raha mampahatsiahy indray izay nataony tamin’ny fotoana nitolomany ihany koa.
Mampientanentana ny fitolomana ho amin’ny demokrasia. Miaina ao anaty tontolo voretra anjakan’ny kisoa tsy mety voky sy mpamotika ny demokrasia isika.Mbola mahatsiaro ny fahataitairako aho tamin’ny andro voalohany nandehanako nilahatra. Tsy hohadinoiko ny taona 1991 fony feno mpilahatra i Jongro, i Euljiro, ary i Kwanghwamun. Tsy maintsy miandry ny amin’ny enina ora hariva ny olon-drehetra hampidinana ny sainam-pirenena ao anaty fahanginana. Ary na dia anaty fijerena fampisehoana aza dia tsy maintsy mitsangana avokoa rehefa mandre ny hiram-pirenena. Raha hanomana fihetsiketsehana izahay, dia samy nihaodihaody miafin’endrika manodidina an’i Dongdaemun, Myeongdong, ary Euljiro ka misy iray mitarika dia manaraka avy hatrany ny rehetra dia manomboka ny fihetsiketseham-panoherana. Izany no nataonay na dia nanana fahalalahana hanao fivoriana sy hanangana fikambanana aza izahay, tena halako izany vaninandro izany.
Lavitra an’i Rangoon.
Tadidiko ny fihetsiketsehana ho amin’ny demokrasia nahafaty olona anarivony maro tao Birmania tamin’ny taona 1988. Nitovy tamin’izany koa ny tantara tao amin’ny tanàna nahabe ahy valo taona lasa izay.
Isan’ny fahitalavitra fijery 1
Isan’ny onjam-peo nisy 1
Gazety mpivoaka 1
Latsaky ny 10 ny toeram-pijerena aterineto, sady tsy ho an’ny teratany….
Manohana ny tolona ho fampanjakana ny demokrasia any Myanmar aho… Na dia handromba-pahefana indray aza ny miaramila ary tsy hiraharaha ny tolona ankehitriny, ny tantara dia mbola hitsara araka ny rariny amin’ny fotoana ho avy
tsy vitsy ny mpiblaogy no nitsikera ny sabakam-pihetsiky ny governemanta Koreana
Rangoon, Myanmmar sy Seoul,Repoblikan'i
Tsy araka ny fomba fitondrana firenena ny itondrana an’I Myanmar anehitriny. Na dia mijoro aza ny firenena, efa norombahin’ny fitondrana miaramila ny fahefana tamin’ny 1988 ary noravany ny antenimiera, ny sampan-draharaham-pitsarana ary ny fitantanam-panjakana. Hatramin’izany fotoana izany, niainga avy amin’ny sivily ny hetaheta ho amin’ny demokrasia izay mampahatsiahy anay ny vikina tao Seoul tamin’ny taona 1980 sy ny revolisiona 4.19, ny tantaran’ny lasanay…Moramora ihany ny manaiky fa raha te-hitazona ny fahefana ny fitondrana miaramila dia tsy maintsy manosihosy ny zon’olombelona. Tahaka ny nitranga teto Korea taloha ihany, nanao soroona ny tombotsoa manokan’ny tsirairay hanatsarana ny fananana iombonana, niova toerana ankehitriny ny fanaovana ny tsy rariny eto Azia.
4. Inona izany no ataon’ny governemanta Koreana amin’ny ankapobeny?
Miatrika ahy izao fanontaniana izao ankehitriny. Nahoana no tahaka ny moana I Korea?
Mandefa tafika any Afghanistan, Iraka, ary Vietnam no mbola handefa any Libanona ihany koa mba hamanjakana ny fandriampahalemana manerantany. Koa raha te-hampanjaka ny fandriampahalemana tokoa izy reo, Nahoana no mangina manoloana izao fanahim-biby izao? Efa nolazaiko fa maro amin’ny zava-mitranga any Muyanmar no mitovy tamin’ny lasan’ny tantaran’ny firenentsika [ Korea]. Mahalala izany ny mpanao politika. Mbola mila mieriteritra zavatra hafa be dia be ve izy ireo? Fa maninona no mangina?